मुख्यमन्त्री हुँ भन्दै भाेट मागेका ज्वाला पत्तासाप, प्रदेश नं. ६ माअाेवादीकाे कब्जामा
सल्यानबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसद प्रकाश ज्वालकाे जति चुनावकाे समयमा चर्चा थियाे त्यति नै अहिले पनि चर्चा भएकाे छ ।
गत मंसिर २१ गते भएकाे प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाकाे चुनावमा ज्वाल मुख्यमन्त्री हुन्छन् भनेर चर्चा थियाे । तर अहिले मुख्यमन्त्री नभएकाे चर्चा चलेकाे छ । अर्काे राेचक कुरा के छ भने- प्रकाश ज्वालाले चुनावी प्रचारप्रसारमा घरदैलाे पुग्दा सल्यानले प्रदेश नम्बर ६ काे अगुवार्इ गर्ने भन्दै अाफु मुख्यमन्त्री हुने दावि गरेका थिए ।
उनले अाफु मुख्यमन्त्रीका लागी याेग्य भएकाे भन्दै जनताले अाफुलार्इ जिताउनु पर्ने बताएका थिए । त्यही समाचार गएकाे मंसिर १२ गते हाम्राे लेकाली अनलाइनमा पनि प्रकाशन भएकाे थियाे ।
तर अहिले ज्वालालार्इ प्रदेश नम्बर ६ काे मुख्यमन्त्री हुनबाट हटाइएकाे छ । अब प्रदेश नम्बर ६ काे मुख्यमन्त्री नेकपा माअाेवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाही हुनेभएका छन् ।
अाज नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त कार्यदलले प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री र सभामुखमा भागबण्डा सहमति गरेपछि ज्वाला मुख्यमन्त्री हुनबाट बन्चित भएका हुन् ।
कार्यदलको बैठकले बामगठबन्धनको बहुमत रहेको ६ वटा प्रदेशमध्ये ४ वटा प्रदेशमा एमालेको मुख्यमन्त्री तथा दुईवटामा माओवादीको मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेको छ ।
बैठकले १, ३, ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गरेको छ भने ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै १, ३, ६ र ७ नम्बर प्रदेशको सभामुख पद एमालेले पाउने भएको छ भने ती प्रदेशको उपसभामुख माओवादी केन्द्रले पाउने भएको छ ।
त्यस्तै ४ र ५ को सभामुख माओवादी केन्द्रले पाउने भएको छ भने उपसभामुख एमालेले पाउने निर्णय गरिएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले जानकारी दिएका छन् ।
बैठकले प्रदेशमा सातदेखि एघार जनाको मन्त्रिमण्डल बनाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्ताे छ गत मंसिर १२ गते सल्यानमा प्रकाश ज्वालाले मुख्यमन्त्री हुन्छु भन्दै भाेट मागेकाे समाचार लेकाली अनलाइनमा प्रकाशित भएकाे ?
६ नम्बर प्रदेशको अगुवाई अब सल्यानले गर्छ : ज्वाला
मंसिर १२ ,सल्यान ।
नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा बाम गठबन्धन बाट प्रदेशसभा सल्यान क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार प्रकाश ज्वालाले २१ गतेको निर्वाचन पछि ६ नम्बर प्रदेशको अगुवाई सल्यानले गर्ने बताएका छन् ।
जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउपालिका वडा नम्बर ५ लेखपोखरामा मंगलबार सम्पन्न संयुक्त बाम गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले अब जनताले जिताए अाफु प्रदेश नम्बर ६ काे मुख्यमन्त्री हुने याेग्य भएकाे बताउका छन् ।
उनले भने “बाम गठबन्धनलाई जनताले अहिले विश्वास गर्ने बेला भएकोे छ । बाम गठबन्धन बाट सल्यानमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवार लाई आफ्नाे अमुल्य मत दिएर विजयी बनाउनुहाेस् हामी ६ नम्बर प्रदेशकाे अगुवार्इ गर्छाै ।”
उनले बाम गठबन्धनका उम्मेदवारको विजयी निश्चित रहेको भन्दै उनले कार्यकर्तालाई कतिपनि नआत्तिकन निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् । सल्यानका प्रतिनिधिले जिल्लाको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैनन, ६ नम्बर प्रदेशमा समेत अगुवाई गर्ने भएकाले ढुक्क चुनावी अभियानमा लाग्न कार्यकर्तालाई उनले निर्देशन दिएका छन् ।